Palitao tsy tantera-drano
Akanjo fiarovana miaro amin'ny statika
T-shirt (miaraka amin'ny fibre anti-static)
Pataloha (miaraka amin'ny fibre anti-static)
Palitao (miaraka amin'ny fibre anti-static)
Akanjo Polo (miaraka amin'ny fibre anti-static)
Akanjo landihazo (misy fibre anti-static)
Palitao tsy tantera-drano (miaraka amin'ny fibre anti-static)
Vest Cotton (miaraka amin'ny fibre anti-static)
Vest fiarovana (miaraka amin'ny fibre anti-static)
Overalls (miaraka amin'ny fibre anti-static)
Tsenan'ny rafitra fanangonana etona lasantsy solika: Dynamics mifaninana & Global Outlook 2025
Global Market Station Gasoline Vapor Collecting System Market Research Report dia manolotra ny topy maso sy ny fandalinana lalina momba ny tsenan'ny solika Gasoline Vapor manangona ny tsenan'ny rafitra momba ny fanatanterahana ny fahatakarana sy ny faharanitan-tsaina eo amin'ny tsena miaraka amin'ny Financial & Industrial A ...
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny lamba samihafa, nahoana ny lamba antistatika no mifidy polyester?
Landihazo Matetika fantatra amin'ny hoe landihazo. Ny fibre dia ampiasaina amin'ny lamba sy ny lamba firakotra. Ny tavy landihazo dia manana tanjaka avo, tsy azo idirana ny rivotra, tsy mahazaka ketrona ary manana fananana mahantra; manana fanoherana hafanana tsara izy, faharoa amin'ny hemp ihany; manana fanoherana asidra ratsy izy io, ary mahatohitra ny alikaola amin'ny r ...
Torolàlana fohy ho an'ny lamba antistatic
Torolàlana fohy ho an'ny lamba antistatika Nandritra ny taona maro dia nanontaniana aho raha toa ka anti-static, conductive, na dissipative ny lambantsika. Ity dia mety ho fanontaniana sarotra mitaky làlana kely amin'ny teknika elektrika. Ho antsika izay tsy manana fotoana fanampiny nanoratantsika ity lahatsoratra bilaogy ity dia amin'ny ...
Lamba 5 izay mahatonga ny static ririnina ratsy indrindra
Isaky ny volana Novambra ianao dia mamoaka ny zipo tianao izay miasa tsara amin'ny akanjo ba ba nataony toy ny blouse silky. Andro vitsivitsy kosa dia miposaka eo amin'ny fehin-kibonao ny somotraviavy amin'ny faharoa rehefa mivoaka any ivelany ianao. Vaovao ratsy: Tsy mijanona ny sainao. Mba hialana amin'ireo toe-javatra tsy nahy-flasher dia ireto ny lamba dimy izay ...
HEBEI FCE FIAROVANA MANOKANA SPECIAL & ACCESSORIES CO., LTD,